Ifekthri yephinikhodi ye-Lapel - Abakhiqizi nabahlinzeki bephinikhodi base-China
Amabheji Esikhumba / Amabheji Amaphoyisa / Izikhonkwane Zezempi
Izikhonkwane ze-Lapel Enamel ezithambile
Izikhathi eziningi ufuna iphinikhodi ejabulisayo engadingi ukwenza isitatimende esikhulu. Kulezi zinhlobo zamaphrojekthi, sinikeza izikhonkwane ze-lapel ezingabizi kakhulu, ezinomnotho. Siza iphinikhodi yakho igqame esixukwini ngezinye zezithuthukisi zethu ezihlukile.
Khiqiza kabusha isithombe sakho ngokuningiliziwe ngokuphrinta okudijithali phezu koqweqwe lwawo.
Yenza iphinikhodi yakho inyakaze ngesilayidi esimisiwe noma i-bobble.
Yenza iphinikhodi yakho ibe yisikhumbuzo esikhazimulayo ngokwengeza amatshe noma amagugu.
Phakamisa umuzwa wephinikhodi yakho ngokungeza izibani noma umsindo.
Izikhonkwane ze-lapel eziphrintiwe isikrini zifaneleka ngokukhethekile imiklamo enemininingwane emihle, izithombe noma ukuhlukaniswa kombala. Ukopha okugcwele kuyatholakala ngale nketho. I-PinCrafters ingumthombo wakho wokuqala wezikhonkwane eziphrintwe ngokwezifiso ngamanani aphansi aqinisekisiwe. Okuvame ukusetshenziswa kakhulu njengesengezo sokufa noma izikhonkwane zoqweqwe oluqinile ukuze kuzuzwe imininingwane emihle kakhulu ngendlela engenakwenzeka. Ukuphrinta isikrini nokho kungasetshenziselwa umbala owodwa noma amalogo anemibala emibili ngempumelelo kakhulu. Lokhu kungaba inketho ethengekayo yebhizinisi elincane elifuna ukusebenzisa izikhonkwane njengomkhiqizo wokuphromotha noma wokumaketha.
Iphinikhodi ye-lapel ye-Rhinestone
Bheka lo mklamo omuhle nokusonteka kwethu okuyingqayizivele, okufanekisela inyanga yokuqaphela inhliziyo.Le bhroshi ebomvu ye-rhinestone yinhle kakhulu, iyisitayela futhi ijabulisa! Ifanele noma yisiphi isenzakalo noma umcimbi wokukhangisa. Ngaphezulu kuka-90 amakristalu erubi agqamile asethwe ekukhazimuleni, kwe-3D-cast. , i-brooch yokugqoka ene-nickel.Inophini lokukhiya ukuphepha ukuze ibekwe kahle kunoma iyiphi into, intambo noma isigqoko.Ngasinye siyisikhwama se-polythene esihlukile.Lesi sipho masibe umuntu okhethekile ophethwe isifo senhliziyo noma uqwashise.
E-Kingtai, sinikeza izingxenye zensimbi ezinembayo zezinhlobonhlobo zezicelo. Umnyango wethu wokwakha wangaphakathi unikeza izinqubo zokukhiqiza ezingabizi kakhulu. Izingxenye eziqoshwe izithombe, ezikhiqizwa kusetshenziswa amasu asezingeni eliphezulu zokwenza amakhemikhali ezithombe kanye nomklamo osizwa ngekhompiyutha, zitholakala ngezinhlobo ezimbalwa ezivamile, kodwa sihlala sikulungele ukubhekana nezidingo nemiklamo yangokwezifiso yekhasimende. Izingxenye zensimbi ezinembayo esizikhiqizayo zingamukela izinhlobonhlobo zezinhlelo zokusebenza. Kusukela ekuvikeleni izinga lebhodi kuya ezingxenyeni zesistimu yokubona, kuya kushimu, amakhava, izivalo, izikrini, nezinye izingxenye ezincane ezidinga ukubekezelelana okuqinile. Izinqubo zethu zokwenza amakhemikhali zisenza sikwazi ukukhiqiza izingxenye zangokwezifiso ezisekelwe kumiklamo yamakhasimende.
Iphinikhodi ye-Lapel ene-Hinged
Ngokufakwa kwensiza encane yehinge, izikhonkwane ze-lapel ezinamahinge ziyakwazi ukugoqeka futhi zingavuleka futhi zivale kalula! Kuyisinqumo esihle sokuveza imiklamo eminingi yemilayezo. Nakuba kuwumklamo wokusebenza olula, ukunyakaza okunembile nokushelelayo kudinga amakhono anolwazi, futhi ngeminyaka yokuhlangenwe nakho kokukhiqiza kwamaphini e-lapel ensimbi, siyakwazi ukwenza le phinikhodi enamahinge enekhwalithi ephezulu nokubukeka okuhle.
Uma uke wabheka ukwenza izikhonkwane zakho zoqweqwe lwawo, cishe uye wabona amagama athi “koqweqwe lwawo oluqinile” kanye “noqweqwe lwawo oluthambile”. Abantu abaningi banombuzo ofanayo: Uyini umehluko? Umehluko omkhulu phakathi koqweqwe oluqinile futhi oluthambile ukuthungwa okuphelile. Izikhonkwane zoqweqwe oluqinile ziyisicaba futhi zibushelelezi, futhi izikhonkwane zoqweqwe lwazo ezithambile ziphakamise imiphetho yensimbi. Zombili izindlela zisebenzisa isikhunta sensimbi esifanayo, futhi zombili zizoba nemibala egqamile futhi egqamile. Kodwa kukhona futhi ezinye izinketho ezikhethekile ukuthi kukhona kuphela koqweqwe lwawo oluthambile.
Khanyisa Izikhonkwane Zelebula Elimnyama
Uma usekhonsathini, endaweni yokucima ukoma noma endaweni emnyama, ingabe uke waqaphela ukubaneka kokukhanya kothile? lokhu kuyisici esithandwa kakhulu semfashini eminyakeni yamuva - izikhonkwane ze-lapel.
Ukukhanya koqweqwe lwawo olumnyama lwephinikhodi yethu yangokwezifiso kuhle kakhulu uma ufuna iphinikhodi yakho igqame esixukwini noma ebumnyameni.
Engeza inhlanganisela yokukhanya okunemibala noqweqwe lwawo ekugcineni kwephinikhodi noma uhlamvu lwemali yakho, bese uyigcoba nge-epoxy dome ukuze uvikele indawo engaphezulu futhi wengeze ukukhanya okukhanyayo.
Ngisho noma kancane kancane kokukhanya, futhi wengeze izinhlansi ezengeziwe kumklamo osuvele ukhazimula. Lena into okufanele ube nayo ukuze isikole sihwebe ngezikhonkwane!
Iphinikhodi ye-lapel ye-Digital Phrinta
Lawa maphinikhodi e-lapel angokwezifiso aseMelika aseqophelweni eliphezulu singakwazi ukwamukela imiklamo yangokwezifiso, uma unomklamo wakho vele usithumelele ifayela lakho lobuciko bedijithali, sizokopisha umklamo wakho wombala sibe amaphinikhodi eqophelo eliphezulu futhi sikulethele wona ngesikhathi!Izinhlobo eziningi zesitoko etholakalayo, sizoqinisekisa ikhwalithi yemikhiqizo kanye nesikhathi sokuhola sokukhiqiza.
Iphinikhodi yokufa enamathele
Imiklamo Yensimbi Engenalutho Nemininingwane Eyinkimbinkimbi
Izikhonkwane ezibunjwe ngokwezifiso zinedizayini yensimbi engenalutho ebaneka ngaphansi kwanoma yimuphi umthombo wokukhanya.
Idizayini yokupholisha ephezulu kuma-lapel amasudi amnyama namabhantshi muhle, kuyilapho izikhonkwane eziqoshiwe ezinemiphetho yakudala zicashile.
Amakhasimende azothanda ukukhetha kwethu koqweqwe lwawo oluthambile noma izinketho ze-cloisonne ukuze axube futhi afanise imibala ekwakhiweni kwawo, kodwa ngomklamo wakudala ngempela, izikhonkwane ze-die struck ziyinketho engcono kakhulu.
Izici Eziyinhloko Izikhonkwane zethu ze-lapel zangokwezifiso zingaqedelwa endaweni ekhanyayo noma ekhethekile.
Lawa maphinikhodi anemidwebo ye-3D yereferensi yakho futhi azobonisa izithombe ze-3D zamaphinikhodi akho.
I-pendant iwumhlobiso omncane one-jump ring eyodwa noma ngaphezulu, noma iketango elincane, elilenga ebhejini yensimbi eyinhloko.
I-dangle iyiphini elithakazelisa kakhulu. Singakwazi ukwenza ngendlela oyifisayo umumo, usayizi, ukuhlelwa kanye nezesekeli zephinikhodi ye-lapel,